Honor 5X, natolotra tamin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Honor 5X, nanolotra ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Honor tamin'ny famaranana kalitao
Andro vitsy lasa izay dia nanolotra anao izahay a famerenana feno ny Honor 7, ny sainam-bolan'ny zana-kazo Huawei izay misongadina amin'ny famaranana kalitao, ny fitaovana matanjaka ary ny vidiny mirary. Fotoana izao hiresahana momba ny mpikambana iray hafa ao amin'ny fianakaviana Honor, ny Manaja 5X.
Ary io omaly io dia naseho tao Munich (Alemanina) ity telefaona vaovao ity, izay lasa anisan'ny fianakavian'i Honor manaraka ny zokin'ny zokiny lahy: vatan'ny unibody aluminium, toetra ara-teknika tsara sy vidiny mamaky tany: 229.99 euro.
1 Tonga tany Espana ihany ny Honor 5X
2 Seho teknika sasantsasany izay tsy handiso fanantenana anao
Tonga tany Espana ihany ny Honor 5X
Hanombohana azy, ny ekipa mpamolavola an'i Honor dia niantehitra tamin'ny Tranombakoka malaza Guggenheim any Bilbao hamorona ny Honor 5X, izay miavaka amin'ny endriny tsy mampino sy manintona, ankoatry ny fananana ergonomika lehibe dia misaotra ireo chassis nohosoran'ny diamondra ary notsaboina tamin'ny firakotra keramika izay mamorona vatan'ny unibody an'ity telefaona vaovao ity
Toy ny zokiny lahy, ny Honor 5X dia mampifangaro sensor sensor misy ny dian-tànana ao ambadiky ny finday vaovao avy amin'ny mpanamboatra Aziatika. Mandra-pahatongan'ny MWC dia tsy hanana fotoana hijerena azy izahay, fa raha toa ka mandeha koa ny Honor 7, izay namela tsiro be tao am-bavako nandritra ny fanadihadiana nataoko tamin'ity terminal ity, ity no iray amin'ireo sensor biometrika tsara indrindra eny an-tsena. Na dia toa mitovy amin'ny lafiny teknika aza izany.
Amin'izany, ankoatry ny famelana mamoha ny terminal na dia amin'ny rantsantanana maloto aza Koa satria ny vokatry ny fahatsiarovana ny sensor dia manatsara ny fahitana ny dian-tananay rehefa mandeha ny fotoana, mamela antsika hampiasa fihetsiketsehana intuitive koa hiantsoana na hanombohana rindranasa, na dia mihidy aza ny terminal. Amin'izany dia azonao atao, ohatra, ny maka sary na manafoana fanairana haingana sy mora amin'ny fihetsika tsotra amin'ny rantsan-tànanao. Fanampiny izay mahatonga ny sensor sensor ho fampiasa lavitra kokoa noho ny raha ampiasainao mba hanokafana ny efijery findainao fotsiny.
Toy ny mahazatra ao amin'ny marika dia miverina manome fanampiana i Honor SIM roa, SIM micro iray ary SIM Nano iray, miampy slot micro SD card. Ary na dia fitaovana ara-teknika tanteraka aza izy io, azonao atao ny manitatra ny fahatsiarovany hatramin'ny 128 GB noho ilay lovia hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny telefaona Honor vaovao. Manantena aho fa handray an-tsoratra an'io andinindininy io ireo mpifaninana aminao satria mahamenatra fa ny telefaona toa ny Samsung Galaxy S6 na ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tsy manana lovia hanitarana ny fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny karatra micro SD.
Seho teknika sasantsasany izay tsy handiso fanantenana anao
Honor 5X dia nitohy nanodidina an'io elanelam-potoana vaovao avo lenta niseho tamin'ny sehatra io tamin'ny alàlan'ny telefaona mahery vaika nefa tsy nahatratra ny ambaratonga voalohany indrindra amin'ny sehatra, noho ireo fitaovana matanjaka izay mamela anao hankafy horonan-tsary atiny lalao na haino aman-jery tsy misy olana. Amin'izany fomba izany, ny Honor 5X vaovao dia manana Fampisehoana IPS Full HD 5-inch, mahatratra 401ppp. Mihoatra noho izay ho an'ny mpampiasa antonony afaka mankafy atiny multimedia maro famaritana.
Ny fo silikony dia voaforon'ny processeur Qualcomm Snapdragon 616, SoC valo-core izay mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandrony hatramin'ny 1.5 GHz.Raha amin'io no ampianay ny RAM 2 GB ary tahiry 16 GB fitehirizam-bola ao anatiny afaka 128GB , miatrika telefaona iray somary feno izahay. Ilay tokana fa hitako ao anaty mémoire anatiny, fa satria azo itarina, io olana io dia mijanona ao aoriana.
Honor dia miloka amin'ny fanomezana fakantsary faran'izay avo lenta ary ny Honor 5X dia tsy ho ambany. Amin'izany fomba izany, ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Honor dia manana Fakantsary lehibe 13 megapixel miaraka amina solomaso misy zoro 28mm sy vavahady f 2,0, miampy fakan-tsary eo anoloana 5-megapixel misy zoro 88 degre, mety tsara ho an'ny selfie. Matetika ny findain'ny mpanamboatra dia miavaka amin'ny kalitaon'ny fakana azy ireo ary hitantsika fa ny Honor 5X dia hanaraka ireo mpikambana hafa ao amin'ny fianakaviana Honor. Ary tsy afaka manadino ny heriny isika Bateria 3.000 mAh, mihoatra ny ampy hanohanana ny lanjan'ny fitaovana rehetra mahaliana ity fitaovana ity.
Tiako manokana ilay marika. Honor dia nahavita nahazo sehatra teo amin'ny sehatry ny fifaninanana tsy mitsaha-mitombo noho ny vahaolana manaraka ny lalàna tena tsotra: manolotra telefaona kalitao amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Miaraka amin'ny Honor 7 dia nanamarika ny teo aloha sy aorin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanolorana fantsona misy famaranana premium sy fitaovana miaraka amin'ny haavon'ny avo lenta amin'ny vidin'ny famakiana tany. Ary miaraka aminy Honor 5X, azonao vidiana izao amin'ny alàlan'ny pejy ofisialin'ny Honor Spain, Nanaitra ahy indray izy ireo.
Tadidio koa fa amin'ny alàlan'ny tranokala Honor dia afaka misoratra anarana ianao ary hahazo tapakila misy fihenam-bidy mahaliana. Tsy noheveriko fa haharitra ny fotoana handefasan'izy ireo iray hahafahanao mitazona a Manomeza voninahitra 5X amin'ny fihenam-bidy izay mety manodidina ny 50 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 5X, nanolotra ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Honor tamin'ny famaranana kalitao
Foza haingam-pandeha dia hoy izy:
Manana NFC ve ianao?
Valiny amin'ny Crab Speed
Makà Final Fantasy II maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra